Waa kuma wiilka shukaansada gabadha uu dhalay Jose Mourinho, mise ciyaaraa kubadda cagta? - Hablaha Media Network
Waa kuma wiilka shukaansada gabadha uu dhalay Jose Mourinho, mise ciyaaraa kubadda cagta?
HMN:- Matilde Mourinho, waa inan 21 sanno jir ah, waxaana dhalay tababaraha haatan ee kooxda Manchester United Jose Mourinho.
Wararka kasoo baxaya dalka Portugal ayaase sheegaya inay gabadhaani bilowday inay shukaansato wiil ka tirsan koox ‘The Playboys’. Taasi malaha tani kama farxin doonto tababare Special One oo doonayey inay gabadhiisu ka fogaato saxaafadda, oo aan nolosheeda gaarka ah laga hadlin.
Wiilka haatan shukaansada gabadha Mourinho waxaa lagu magacaabaa Danny Graham, wuxuuna la dhashay Adam iyo Jeff, oo ah laba wiil oo ku mashquulsan shaqada uusan shaqsi masuul ah ku dhiiran ee ‘The Playboys’.
Danny ayaa daaha laga qaaday inuu bartay Matilde xilli dhawaan ay safar ku joogtay dalkeeda Portugal, tababarihii hore ee kooxda Chelsea ayaana arrintaan ka warhelay iyadoo aysan gabadhiisu u sheegin wuxuuna ka akhristay warbaahinta Portugal iyo kuwa England.
Halkaan hoose ka daawo sawirro dheeraad ah. Shabakadda Gool.Net waxay daqiiqad kasta kuula diyaar tahay warar ka baxsan garoonka.